fiber optic plc idabula
Ikhebula lokudonsa nxazonke le-FTTH
Ukuvalwa kwe-fiber optic splice, ...
Fibre optic ukusatshalaliswa bo ...
Fibre optic uphonsa ikhebula nge ...
Ftth uphonsa ikhebula lensimbi yensimbi ...
Fibre optic PLC idabula
Imininingwane yomkhiqizo I-fiber optic PLC (i-Planar lightwave circuit splitter) enye eyibiza nge-blockless fiber PLC splitter, uhlobo lwedivayisi yokulawulwa kwamandla kagesi eyakhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe be-silica optical waveguide ukusabalalisa amasiginali we-optical kusuka eCentral Office (CO) kuya ezindaweni eziningi eziseduze. I-fiber optic splitter uhlobo lomkhiqizo we-ODN ofanele amanethiwekhi we-PON angafakwa kukhasethi ye-pigtail, ithuluzi lokuhlola nohlelo lwe-WDM, olwehlisa isikhala somsebenzi. ...
I-fiber optic PLC (i-Planar lightwave circuit splitter) enye eyibiza nge-blockless fiber PLC splitter, iwuhlobo lwedivayisi yokulawula amandla we-optical eyakhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe be-silica optical waveguide ukusabalalisa amasiginali we-optical kusuka ku-Central Office (CO) ezindaweni eziningi.
I-fiber optic splitter uhlobo lomkhiqizo we-ODN ofanele amanethiwekhi we-PON angafakwa kukhasethi le-pigtail, ithuluzi lokuhlola nohlelo lwe-WDM, olwehlisa isikhala somsebenzi.
Ukulahleka kokufakwa okuphansi (IL)
Ukulahlekelwa okuphansi kwe-polarization (PDL)
Isakhiwo seCompact sivumela ukuthi sisetshenziswe ngamabhokisi ahlukahlukene wokuqeda
Easy futhi ephansi ukufakwa FTTH
Ukuzinza kwemvelo okuhle kakhulu
I-wavelength esebenzayo (nm)
Ubukhulu be-fiber fiber, mm mmmm
Uhlobo lwe-fiber ebonakalayo
Ukufakwa ukulahlekelwa (dB)
Ukwehlukaniswa Kokuncika Kokwehlukana nokwehlukana (dB)
Ukulahlekelwa okuncike kwi-Wavelength (dB)
Buyisela ukulahlekelwa (dB)
Ithempelesha yokusebenza ℃
-20 kuye ku-85
Ukushisa kwesitoreji ℃
-40 kuye ku-85
Optical fibre ubude (m)
Ukufakwa kwangaphakathi nangaphandle komnyango we-FTTH
I-Passive optical network (PON)
Izinhlelo zokuzwa ze-fiber
I- i-PLC idabula ngaphandle ingavumela i-interface eyodwa yenethiwekhi ye-GPON ukuthi yabelwe phakathi kwababhalisile abaningi futhi ivumele abahlinzeki bezinsizakalo ukuthi banike amandla izinhlelo ezinamandla zomkhawulokudonsa. Idabula elingenakuvimba linosayizi omncane, okuwukukhetha okuphakathi nendawo phakathi kwevolumu miniaturization nokuvikelwa kwe-fiber okuthembekile. Kukulungele ukufakwa ohlelweni lwakho lokuklama nokukhiqiza I-PLC splitter esiyinikezayo yilezi: 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32,1 × 64.
Iphakheji lalesi sihlukanisi se-PLC silula ibhokisi lebhokisi. Indlela yokupakisha pallet iyatholakala futhi, hlola imininingwane eminingi ngokuthengisa kwethu.
I-Jera line isebenza ngokuya nge-ISO 9001: 2015, lokhu kusivumela ukuthi sithengise emazweni angaphezu kuka-40 nezifunda ezinjenge-CIS, i-Europe, iSouth America, i-Middle East, i-Afrika ne-Asia.
Siphakela izesekeli ze-fiber optical cable zokwakhiwa kwe-FTTH futhi sinikeze lonke ikhithi lezesekeli kumakhasimende ethu, njenge ikhebula le-fiber optic, izibopho zekhebula, ubakaki wekhebula, amabhokisi wokuqedwa kwe-fiber optic, ama-adaptha, intambo yepatch njalonjalo.
Uyemukelwa ukuxhumana nathi mayelana Intengo ye-fiber optic PLC yokuhlukanisa.
Langaphambilini I-Mini PLC Cassette splitter
i-PLC idabula ngaphandle
Fibre optic Ikhebula Splitter Factory
Abakhiqizi be-Fiber Optic Cable Splitter
Intengo ye-fiber optic PLC yokuhlukanisa
ikhasethi elincane le-PLC splitter
Ibhokisi lokusabalalisa le-Fiber optic, i-Fodb-8
I-fiber optic PLC Cassette splitter
I-Ftth ibhokisi lokuqeda i-FODB-8A
Ama-adaptha we-Fiber optic, Imodi eyodwa
I-Mini PLC Cassette splitter